. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: နေ၀င်ချိန်
ကျမ အိမ်ကနေ မှတ်တိုင်ပေါင်း ၈မှတ်တိုင်လောက်မှာ ဘုံကျောင်းတခုရှိတယ် .. မနက် အိပ်ရာနိုးပြီဆိုတာနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီး ထွက်လာလိုက်တာပဲ .. အိမ်မှာနေလဲ ဘာမှမထူးသလို အိမ်မှာ ကျမ တယောက်တည်း ကျန်နေမှာကိုလည်း ဘယ်သူမှ မလိုလားကြဘူး .. ကျမ မီးတွေဘာတွေကိုင်တာ စိတ်မချဘူးတဲ့ .. ဒါတွေက ကျမ ငယ်နုစဉ်တည်းက ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ အလုပ်တွေပါ .. အသက်နဲနဲရတော့ တခါတလေ နဲနဲပါးပါး မေ့တတ်တယ် .. ဒါကိုပဲ အိမ်က လူတွေက သီးမခံနိုင်ကြဘူးလေ .. တယောက်တည်းအိမ်မှာ ကျန်ခဲ့မယ်ဆို အိမ်က သမီးလုပ်သူက မီးတွေပဲလျှောက်ဖွင့်ထားမလား .. ဂက်စ်အိုးပဲ လျှောက်ဖွင့်မလား ပူရှာတယ် .. အသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့ အရွယ် အဘွားကြီးကို ငြိုငြင်ပြီပေါ့ .. ထားပါလေ .. ဖြစ်လာမှတော့ ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး .. သူတို့ အပြောအဆို လွတ်အောင် စိတ်ပူရ သက်သာအောင် အိမ်နားက ဘုံကျောင်းပဲ သွားနေတာ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး မနက် အိပ်ရာထ သူတို့တွေ အလုပ်မသွားခင်ပဲ ထွက်လာလိုက်တော့တယ် ..
ကျမမှာ သား၁ယောက် သမီး ၁ယောက် ရှိတယ် .. သားက တခြားနိုင်ငံမှာ အခြေကျနေပြီ .. သမီးလုပ်သူနဲ့ သူ့ အမျိုးသားကတော့ ကျမတို့နဲ့ တူတူပေါ့ .. ကျမတို့ဆိုတာ အဖိုးကြီးရှိစဉ်ကတော့ ကျမတို့ပေါ့ .. ခုတော့ ကျမတယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် .. အဖိုးကြီးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်လောက်ကပဲ ဆုံးပါးသွားပြီ .. သူ့အတွက်တော့ ငြိမ်းချမ်းသွားတာပေါ့ .. ကျမကသာ ..
သမီးလုပ်သူက ကျမတို့အတွက် အိပ်ဖို့ နေရာပေးတယ် .. ထမင်း ကျွေးတယ် .. တခါတလေ ထမင်းဖိုးပေးတယ် .. ဒီလောက် စောင့် ရှောက်ပေးတာပဲ ကျေးဇူးတင်နေရတယ် .. သူများတကာ သားသမီးတွေများဆို ဒီလိုလေးတောင် ထောက်ပံ့ မပေးဘူး .. စားချင်လည်း ရှာစားပဲ .. ခုတော့ ကျမ ကံကောင်းပါတယ်လေ ..
ကျမ ကျန်းမာရေး ခုတလော သိပ်မကောင်းဘူး .. ရာသီ နဲနဲ အပြောင်းအလဲဖြစ်ရင် လူက ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ .. ကိုယ်လက်ကိုက်သလို ခေါင်းမူးသလို အားမရှိသလိုပဲတော် .. ရှင်သာရှိရင် ကျမကို ဂရုတစိုက် ဆေးသောက်ဖို့ သတိပေးဦးမှာ .. ခုတော့ ကျုပ်တယောက်တည်း အိပ်ရာထဲသာ ခွေနေလိုက်ပါတော့တယ်တော် .. အိပ်နေရင်း စဉ်းစားမိသေးတယ် .. ရှင်သာ ခုချိန် လာခေါ်ရင် ကျုပ် ငေါက်ခနဲ ထလိုက်လာမိမှာတော့ ..
အင်း .. ကျောင်းတော့ ရောက်ပြီ .. ရှင့်အကြောင်း တွေးလာလိုက်တော့ ရောက်မှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး .. ဒါလည်း ခပ်ကောင်းကောင်းပဲ
နေကလည်း ပြင်းတယ်တော် .. ခေါင်းကလည်း ရိတ်တိတ်တိတ်နဲ့ .. သြော် .. အဖိုးကြီးအုတ်ဂူတောင် ဖုန်တွေ များနေပါ့လား .. သုတ်ဦးမှ ..
အမလေး .. ခေါင်းထဲက မိုက်ခနဲ မိုက်ခနဲ ဖြစ်နေပါလား .. အဖိုးကြီး အုတ်ဂူနား ခဏထိုင်နားဦးမှ ..
ဟင်း .. အဖိုးကြီးရေ .. ကျုပ် ရှင့်နောက် လိုက်လာရတော့မယ် ထင်ပါတယ် .. ကျုပ်လည်း သားသမီးက ပစ် ဂရုစိုက်မယ့်သူ မရှိတဲ့ ဘ၀ .. စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်တဲ့ ဘ၀ကနေ လွတ်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့ ..
ကျမ မျက်ရည် မကျတော့ပါဘူး .. ကျစရာ မျက်ရည်လည်း မကျန်တော့ဘူး .. သားသမီးအတွက် လင်သားအတွက် ပူရ ပန်ရ မျက်ရည်ကျရနဲ့ ကျမအတွက်တော့ ထုံနေပါပြီ .. နေက ပြင်းလွန်းလို့ တကိုယ်လုံး ကျိန်းစပ်နေပေမယ့် နေရာက ရွေ့ဖို့ အားမရှိတော့ဘူး .. တချက်လှုပ်ဖို့ အသက်မထွက်မတတ် ပင်ပန်းနေတယ် .. အဖိုးကြီးရေ ရှင့်ဘေးနားမှာ ကျမ လဲလျောင်းလိုက်မယ် .. သတိမေ့သွားတာ ဖြစ်ဖြစ် အသက်ထွက်သွားတာ ဖြစ်ဖြစ် ကျမ ခု ခံနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေ ပျောက်ကင်း သွားမယ် ..
ကျုပ်တော့ အသက်ရှုရတာ မ၀တော့ဘူး .. ပင်ပန်းလိုက်တာ ..
မျက်လုံးတွေ ကျိန်းလိုက်တာ .. အလင်းတွေ ဘယ်က ၀င်နေပါလိမ့် .. ဟင် .. အဖိုးကြီး .. ရှေ့မှာ အဖိုးကြီး မျက်နှာက ပြုံးလို့ လာဖို့ ခေါ်နေပါလား .. ဟင် .. လှည့်ထွက်သွားပြီ ..
ကျမ ကုန်းရုန်းထလိုက်တယ် .. ကျမ ခန္ဓာကိုယ်က ခုနကလို မဟုတ်တော့ပဲ ပေါ့ပါးနေပါလား .. ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးဖြစ်သွားတဲ့ ခန္ဓာနဲ့ အဖိုးကြီးနောက် ပြေးလိုက် လိုက်တယ် ..
အဖိုးကြီးရေ ခဏလေးတော့ စောင့်ပါဦး ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 5/11/2011 12:23:00 AM
အဘွားကြီးက တစ်ကယ် လိုက်သွားရှာတာကိုး...